Horudhac: Barcelona vs Eibar… (Wiilasha Quique Setien oo eegeya guushoodii shanaad oo xiriir ah ee garoonkooda horyaalka La Liga) – Gool FM
(Barcelona) 22 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhoweynaysa naadiga Eibar maqribnimada maanta oo Sabti ah, iyadoo wiilasha macallin Quique Setien ay eegayaan inay gaaraan guushoodii shanaad oo xiriir ah ee garoonkooda horyaalka La Liga.
Kulankii ugu dambeeyey Sabtidii kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa 2-1 uga adkaatay Getafe, iyadoo guul ay maanta gaaraan ay Blaugrana ay ku ridi karto inay hoggaanka horyaalka La Liga la wareegaan ugu yaraan saacado kooban.
Kooxda Eibar ayaa ku jirta bandhig aad u hooseeya iyadoo kaliya guuleysatay labo kulan 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka.
Garsooraha: Cesar Soto Grado (Spain)
Labada difaac ee Samuel Umtiti iyo Clement Lenglet ayaa labaduba hal kaar oo digniin ah u jira inay ganaax ku seegaan kulanka El Clasico, iyadoo Umtiti ka filayo inuu kulankan ku soo bilowdo, waxaana waajib ku ah inuu ka fogaado inuu qaato kaarka digniinta si uusan u maqnaan kulanka ay la leeyihiin Real Madrid.
Junior Firpo ayaa sii wadan doona inuu ka ciyaaro daafaca garabka bidix ee Barcelona, iyadoo Jordi Alba uu garoomada dhaawac kaga maqan yahay.
Ivan Rakitic ayaa la filayaa in laga door-bido labadaba Arturo Vidal iyo Arthur, marka la eego booska khadka dhexe.
Barcelona ayaa xaqiijisay khamiistii inay la soo wareegeen Martin Braithwaite kaasoo ay ka soo qaateen Leganes kaasoo loo ogolaaday inay u soo qaataan bedelka Dembele ayaa ku jira shaxda kooxda, laakiin lama oga inuu ciyaarayo kulankan.
Dhinaca kale Kooxda Eibar ciyaaryahankeeda Jose Luis Mendilibar ayaa la filayaa inuu ka mid noqdo sadexda nin khadka dhexe kuwaasoo caawa ka soo muuqan doona garoonka Camp Nou.
Gonzalo Escalante ayaa sidoo kale ka garab ciyaari kara Edu Exposito iyo Pape Diop.
Anaitz Arbilla ayaa laga filayaa in laga door-bido Alvaro Tejero booska garabka daafaca garabka midig, halka Pedro Bigas uu ku bilaaban karo daafaca dhexe ee kooxda Eibar.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleysatay 18 ka mid ah 19-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 23 ka mid ah 27-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay gurigeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa guuleysatay labadaba qeybta hore iyo ciyaarta oo dhammaystiran 9 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaatay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleysatay 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.
>- Kooxda Eibar ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto 25 ka mid ah 27-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa guuleysatay labadaba qeybta hore ee ciyaarta iyo kulanka oo dhammaystiran 6 ka mid ah siddeedoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.